▷ Samsung AU7100 Crystal UHD (UE43AU7100) Smart TV Review - 【Isbarbardhigga】 2022
Samsung Crystal UHD 2020 43TU7095 - 43 "Smart TV, 4K, HDR 10+, 4K Processor, PurColor, Sound ...
Crystal uhd: awood u leh inay soo saarto in ka badan hal bilyan oo midab leh oo nadiif ah; Tapview: ku taabo telefiishankaga casriga ah oo muraayadiisa muraayadda si aad u aragto inuu ka weyn yahay
1 Hal daqiiqo oo dib u eegis ah
5 Waxqabadka sawirka
6 Waxqabadka maqalka
7 Miyaan iibsadaa Samsung AU7100 Crystal UHD TV?
7.1 Iibso haddii ...
Hal daqiiqo oo dib u eegis ah
TV-yada calanka leh oo leh maan-doorasho maskaxeed ayaa aad u fiican, laakiin waxa aan runtii rabno waa TV la awoodi karo oo leh cabbir shaashad ah oo nagu habboon, taasina waxay wax uga qabanaysaa aasaaska u noqoshada TV-ga si cajiib ah.
Samsung ayaa heshay, taasi waa sababta ay u jirto qiyaasta AU7100.
Liiska togan waa mid dheer, oo u dhexeeya tayada dhismaha iyo naqshadeynta, ergonomics iyo TV smart, ilaa tayada sawirka 4K. Si kastaba ha ahaatee, AU7100 waxay si buuxda u saxaysaa sanduuqyadan qaab ka dhigaya qiimaha weydiinta inuu u muuqdo mid deeqsinimo leh.. Iyo meesha ay ka yar tahay mid cajiib ah, oo leh tayada codka iyo kartideeda (ama aan ahayn) si loo cabbiro nuxurka da'da, inta badan, si fiican, kama liidato qaar ka mid ah naqshadaha beddelka ah ee kharash yar ka badan.
Markaa intaad ogtahay cabbirka shaashadda ee aad u baahan tahay oo aad dejiso miisaaniyad dhexdhexaad ah laakiin aan macquul ahayn, Samsung waxay kaa iibin doontaa AU7100 oo ku qancin doonta sannadaha soo socda.
Samsung AU7100 ayaa durba laga iibinayaa UK, iyadoo AU7000 uu yahay midka ugu dhow ee u dhigma Ameerika.
Kala duwanaanshaha 43-inch ee aan halkan ku tijaabineyno waa € 449, inkastoo lagu heli karo cabbirro kala duwan: nooca 50-inch wuxuu ku kacayaa € 549, waxaa sidoo kale jira 55-inch € 599, 65-inch € 799, 70- inch € 899, 75-inji ah (badanaa € 999, in kasta oo waqtiga qoraalka laga helayo Samsung UK € 100 qiimahaas) iyo moodel weyn oo 85-inji ah € 1,799.
Markaa haddii aadan ka heli karin AU7100 cabbirkiisu sax yahay khadkaan, dhibaatada aasaasiga ah ayaa adiga kaaga badan tan Samsung.
Ma ahan wax aan caadi ahayn in Samsung ay horumariso noocyo gaar ah oo moodeel ah dhulal gaar ah, waxayna u muuqataa inay xaaladdu halkan tahay. In kasta oo ay jiraan moodooyinka Samsung ee suuqyada Maraykanka iyo Australiya oo aad ugu eg AU7100, isku mid maaha. Taasi waxay tidhi, waxa ugu yar ee macaamiisha Maraykanka ama Australiyaanka ay ka filan karaan qaabka AU7100 ee ay heli karaan waa in si aad ah loo qiimeeyo.
La yaabka caato ah.
Cagaha waa kala fog yihiin.
6cm qoto dheer.
Xitaa TV-yada ugu qaalisan waxay u muuqdaan inay u ciyaaraan si badbaado leh marka loo eego naqshadeynta, marka qofna ma filayo in nakhshad dibadeed uu kobcayo marka ay timaado qaabka caadiga ah sida AU7100. Dabcan, ma jiraan, taas oo hubaal ah wax wanaagsan.
Waa nooc xariif ah, AU7100, oo ku dhawaad ​​aan jirin bezel oo ku wareegsan dusha iyo dhinacyada shaashadda. Gariirada hoose, oo leh calaamad yar oo dhexe oo "Samsung", maaha mid aad u weyn. Oo haddii aadan ku dhejin AU7100 derbiga, cagaheeda boomerang ee fudud ee caagga ah riix oo guji si aad u sii wadato dareenka ugu yar. Ogow inay aad u kala fog yihiin, sidaas darteed xitaa shaashad aad u jilicsan sida qaabka 43-inch ee aan ku tijaabineyno halkan waxay u baahan tahay aag macquul ah oo weyn si uu u istaago.
Si aan la yaab lahayn TV-ga loogu talagalay inuu ku dhufto qiimo yar oo qiimo yar, Samsung si ku filan ayaa loo cayimay halkii deeqsinimo ahayd. Saddex HDMI gelinnada (dhammaantood waxay bixiyaan qaabka daahitaanka auto-hoose ee qaabka HDMI 2.1), gelinta USB, xiriiriyaha Ethernet, terminaalka anteenada RF, iyo booska CI ee agabka jirka, halka isku dhafka Wi-Fi iyo Bluetooth 4.2 ay daryeesho isku xirka wireless-ka.. Waxaa jira wax soo saarka indhaha ee dhijitaalka ah oo loogu talagalay baararka dhawaaqa dhaxalka ah iyo mid ka mid ah saldhigyada HDMI waa eARC-u hoggaansanaanta u dhiganta casriga ah.
AU7100 waa qayb ka mid ah khadka Samsung ee bandhigyada Crystal UHD iyo sida oo kale waa 4K LCD/alladda LED oo leh nal dhabareed oo lagu habeeyey cidhifyada bandhigga.. Tayada sawirka waxaa xukuma Matoorka wax-qabadka ee shirkadda Crystal Processor 4K. Dhanka HDR, sidoo kale, waa Samsung sida caadiga ah, taas oo macnaheedu yahay HLG, HDR10 iyo HDR10+ metadata firfircoon, laakiin maaha wax yar oo Dolby Vision ah. Samsung waxay ku guulaysatey inay ku darto 'Filimsameeye Mode' mid ka mid ah sawirada hore ee AU7100 iyo digniinta ifaysa ee ku saabsan kororka isticmaalka korantada haddii qaabkan la doorto waligiis kuma guuldareysto inuu maaweelo, marka loo eego iftiinka hooseeya ee sawirada ka dhashay.
Wuxuu la yimaadaa laba kontarool oo fog
Interface aad u fiican oo Tizen ku salaysan
Fursadaha xakamaynta codka
Interface-ka Smart TV-ga ee Tizen ku salaysan ee Samsung ay ku adkaysatay sannado badan ayaa si dabiici ah u saxan oo kaliya waxay u baahan tahay waxa ugu yar ee cusboonaysiinta si ay ugu sii jirto tartan.. Markaa halka AU7100 aanu ahayn kan keliya ee yar, ee la awoodi karo ee lagu qalabayn karo portal Smart TV oo dhammaystiran oo si fudud loo isticmaali karo, waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan suuqa.
Sida Samsung ay u baratay dhawaan, AU7100 waxay la socotaa dhowr fogaano kuwaas oo lagu dhex maro interface-ka, iyada oo loo marayo menus-ka, iyo wax kasta. Mid waa (oo ma jiraan laba siyaabood oo loo sameeyo) jahawareer, aan fiicneyn, raqiis ah oo culeys badan leh, halka kan kalena uu yahay mid aad u fiican oo aad uga yar "kaliya aasaasiga ah" beddelka.
Ma jiro wax koontaroolka codka ku dhex dhisan halkan, laakiin haddii Samsung-gaagu ku jiro shabakad guud, waxa lagu xakamayn karaa iyadoo la isticmaalayo Amazon Alexa ama Google Assistant ku hadla caqli badan. Ama waxaa jira Samsung's Smart Things app kantaroolka, kaas oo halkan u deggan oo faa'iido leh sida uu ula mid yahay Samsung TV kasta.
Samsung AU7100 Crystal UHD (UE43AU7100) Smart TV Review 1
Sawirro raaxo leh oo qasbaya 4K
Ka fog kormeeraha ciyaaraha ugu xun halkaas
Waxay ka dhigi kartaa fuulitaanka shaqo
Waa muhiim in maskaxda lagu hayo qiimaha marka la tixgelinayo sawirada Samsung AU7100 uu awood u leeyahay inuu keeno. Maya, maaha shaashadda ugu ifaysa suuqa iyo maya, awoodda miisaankeedu kuma dhigi doonto inaad u maleyso inaad daawato waxyaabaha 4K ee asalka ah markaadan joogin. Laakiin, Miyay ka dhigan tahay qiimo wanaagsan oo lacag ah? Oh xaqiiqdii.
Iyada oo ay ku jiraan waxyaabo qaali ah (Scorsese's Irishman-ka iyada oo loo sii marayo Netflix wali waa saacad la sheegi karo, xitaa haddii Samsung aysan xamili karin qaybta Dolby Vision), AU7100 waxay caddaynaysaa inay tahay saacad la soo koobay oo faahfaahsan oo leh indho-indheyn badan oo khuseeya. On texture ee maqaarka iyo xaaladda guud ee wejiga dadka waayeelka ah ee filimka. Midabada ayaa si hoose loo kala soocaa, iyada oo leh kala duwanaansho badan oo la heli karo marka ay timaado hooska, qaababka iyo qaababka.
Tani waxay sidoo kale run u tahay codadka madow iyo codadka cad, in kasta oo Samsung aysan ahayn mid dhalaalaya oo ay ku dhibtoonayso inay keento madow run ah., Weli waxaa jira tafaasiil badan oo lagu muujiyey dhawaaqyadan, sidaas darteed dareen lagu qanco oo ka duwan. Isku dheelitirnaanta ay AU7100 ka heshay dhinaca midabka iyo isbarbardhigga ayaa ku qanacsan xaalad kasta, maadaama Samsung ay awood u leedahay inay ku qabato nuucyada iftiinka oo leh xirfad dhab ah.
Qeexida cidhifku waa fiiqan yahay, oo leh sawirro 4K asal ah, sawaxanka sawirku wax yar ayuu ka badan yahay kuwa la maqlo. Dhaqdhaqaaqa sidoo kale waxaa lagu maareeyaa kalsooni dhab ah. Haddii aad rabto TV la awoodi karo si aad uga faa'iidaysato waxa ku jira 4K, Samsung AU7100 waa inuu ku jiraa liiskaaga ugu sarreeya.
Kor-u-qaadista 1080p Blu-ray disc ee Oshi's Ghost ee Shell waxay Samsung ka saartaa aagga raaxada, laakiin aad uma badna. Palette-ka midabku wuxuu ahaanayaa mid fidsan oo (sida ku habboon nuxurkan) wuxuu xuduud la leeyahay caajisnimo, halka heerarka tafaasiisha ay ahaanayaan kuwo si xushmad leh u sarreeya. Si kastaba ha ahaatee, halkan waa rakibidda AU7100 oo leh codad madow: waxay yihiin kuwo isku mid ah oo aan lahayn kala duwanaansho.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaaqa sawirka waa la xakameynayaa oo geesaha waxaa had iyo jeer lagu tilmaamaa si kalsooni leh. Dhaqdhaqaaqa sidoo kale wuxuu ahaan doonaa mid sahlan oo lagu qanci karo, isla markaad gudaha u gasho menus-ka dejinta oo aad hagaajiso dejinta. " Yaraynta Gariirka" iyo "LED Motion cad".
Si kastaba ha ahaatee, shay ka macluumaad ka hodan ah kan ayaa laga yaabaa inuu u ekaado wax qiyaas ah. Sawaxanka sawirka ayaa helaya kalsooni, cidhifyadu waxay soo noqonayaan xoogaa, si fiican, dhaqdhaqaaqyada shaashadda waxay bilaabayaan inay u muuqdaan kuwo caajis ah oo aan caadi ahayn. Taageerayaasha bandhigyada TV-ga maalintii hore waxay hore u ogaayeen inay u ekaan karaan taariikh, laakiin AU7100 waxay caddaynaysaa inay ka dulqaad yar yihiin iyaga (ama ay ka yar tahay iyaga) marka loo eego beddelka kale ee "la awoodi karo".
Waa kormeeraha ciyaaraha oo aad u wanaagsan, in kasta oo milkiilayaasha console-ka soo socda ay u badan tahay inay raadinayaan wax awoodo ka badan taas, HDMI 2.1.. Daahitaanka wax-soo-gelinta ayaa si xushmad leh u hooseeya, iyo dib-u-ciyaar tayo sare leh oo dusha sare saaran, dhammaan waxyaabaha wanaagsan ee ku xeeran midabka, dhaqdhaqaaqa iyo tafaasiisha ayaa weli ah kuwo sugan.
Dhawaaqa Stereo iyo 20 watts oo awood ah
Isugeyn iyo tayo maqal oo aad u kala duwan
Wuxuu la shaqeyn doonaa Samsung 'Q Symphony' sanqadhaha
Sida aad loogu saadaalin karo telefiishanka qiimahan, AU7100 waxa uu leeyahay hab sanqadh prosaic ah. Labada ku hadla ee kala duwan ee buuxa, oo wadartoodu tahay 20 watts, cidna kama yaabin doonaan, laakiin inay cadaalad noqdaan, Samsung AU7100 aad ayuu uga fog yahay inuu yahay TV-ga ugu liita suuqa. Waa dhegaysi ka duwan, oo leh nooca daacadnimada dhexdhexaadka ah ee ka dhigaya codka mid dabeecad leh iyo wada-hadallada si fudud loo raaco.
Waxay ku dhowdahay iyada oo aan la sheegin in joogitaanka yar ee soo noqnoqoshada hooseeya, laakiin xitaa haddii aad go'aansato inaad ogaato waxa 20 watts ay awoodaan, AU7100 weli waa dhegeysi isku dhafan.
"Q Symphony Lite" waa laga heli karaa halkan, marka markaad go'aansato in dhawaaqa cusub ee AU7100 uu asal ahaan lama huraan yahay, Fiiri khadka "Q Symphony" ee Samsung. Kuwani waxay u oggolaanayaan kuwa ku hadla TV-ga inay ku biiraan dhawaaqa halkii lagu beddeli lahaa, natiijaduna waa inay noqotaa mid qani ah, cod ballaadhan.
Miyaan iibsadaa Samsung AU7100 Crystal UHD TV?
Iibso haddii ...
Ma jeceshahay in aad yeelato xakamaynta
Amarka codka, codsiga xakamaynta ama kaantaroolka fog. Dooro Samsung AU7100 sida ay u wada dhan tahay.
Waxaad doorbidaa waxyaabo tayo sare leh
Maaha wax la yaab leh, laakiin TV -gaan gaarka ah ee Samsung wuxuu ku dadaalaa sida ugu wanaagsan ee leh walxaha 4K ee asalka ah, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon dadka iska diiwaangeliya adeegyada qulqulka UHD.